खर्चिला दलका महाधिवेशन, ‘भ्रष्टाचार र वेथितिलाई प्रश्रय’ – Satyapati
खर्चिला दलका महाधिवेशन, ‘भ्रष्टाचार र वेथितिलाई प्रश्रय’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा मात्रै नभएर पार्टीका आन्तरिक निर्वाचन र महाधिवेशनले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिइरहेका छन् ।
काशीराम शर्मा । १८ पुष २०७८, आइतवार
२०१५ सालमा विपी कोइराला चुनाव लड्दा नेपालमा पिच बाटो भनेको सिंहदरबारदेखि लैनचौरसम्म मात्रै थियोे, धेरैजसो सांसद र मन्त्री साइकल चढेर हिँड्थे । अहिले हरेक घरमा मोटरसाइकल, स्कुटरदेखि विलासी गाडीसम्मका सवारी साधन छन् । आम निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च दायित्व जतिसुकै भए पनि यथार्थमा त्योभन्दा धेरै गुणा चुनावी खर्च हुन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा धेरै राम्रा व्यक्तिहरु, विगतमा पार्टी संङ्गठन बनाएर पार्टी धानेका व्यक्तित्व यहि खर्चिलो चुनावका कारण पछाडि सरेका छन्, जित्नुपर्ने र आउनुपर्ने उम्मेद्वार आर्थिक जोहो गर्न नसकेरै ब्याक भएका छन् । एउटा वडाध्यक्षको ५ बर्षको तलब र भत्ता लगभग १५ लाख रुपैयाँ होला । जबकी यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको स्थानीय चुनावी खर्च नै १५ देखि २५ लाखसम्म गरेको पनि सुनिएको छ ।
एउटा प्रतिनिधि सभाको सांसदको जम्मा ५ बर्षको तलब र भत्ता गरी लगभग ४० देखि ४५ लाखसम्म होला, जबकि उक्त सांसदको २ देखि ३ करोडसम्म खर्च भयो अरे भन्ने सुनिन्छ । कहिलेकाहिँ गाउँतिरका वडामा जानु पर्यो जीप रिजर्भको खर्च ५ देखि ७ हजारभन्दा थोरैमा पाइँदैन । पहिले नास्ता भनेको भुटेको मकै र मोइ हुन्थ्यो, अहिले चाउमिन र मःम मात्रै होइन महङ्गा परिकारका नास्ता पाइन्छ ।
मानिसको जीवनस्तर विकसित हुँदै जाँदा विलासिता पनि बढ्दै जानु स्वभाविकै हो । तर हरेक कार्यकर्ताले यो मेरो पनि चुनाव हो, मैले मेरो पार्टीलाई जिताउने हो भनेर सवारी साधनमा हाल्ने इन्धन र नास्ताको खर्च आफैं गरे कस्तो हुन्थ्यो होला ? कार्यकर्ताहरुले बियर र मासुभात आफ्नै पैसाले खाए कस्तो हुन्थ्यो होला ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु उठ्न सक्छन् । राजनीति धनी र गरिब दुबै वर्गको लागि सम्भव हुनुपर्छ ।
राजनीति विचार र सिद्धान्त हो भन्ने भावना नजाग्दा विकृत हुँदै गएको छ । अब नेपाली राजनीतिक दलका एजेण्डा यस्ता बिषयमा केन्द्रीत भई यसको समाधानका लागि मन्थन र विचार विमर्श गर्नुपर्दछ । आम चुनावताका मात्रै होइन पार्टी आन्तरिक चुनाव, महाधिवेशनमा पनि यस्ता विषयहरुमाथि गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ । अहिले नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्, केही दलले गर्दैछन् ।
हालसम्म नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशन सकिसकेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशनकै बन्द सत्रको चरणमा छ । यी नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाउने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन आर्थिकरुपमा कति मितव्ययी भए, कति खर्च भयो आमनागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
संसदको पहिलो ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेको चितवनमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशन महाधिवेशन खर्च कति भयो होला ? नारायणी किनारमा तामझाम र तडकभडकसहित उद्घाटन सकेको एमालेले पर्यटकीय स्थल चितवनमा बन्द सत्र सम्पन्न गरेको थियो । त्यतिबेला महाधिवेशनको दृश्य नियाल्दा यो पार्टीले सर्वहाराको नेतृत्व गर्छ भन्नेमा सन्देह पैदा हुन्छ । महाधिवेशन भव्य बनाउन एमालेले आयोजनास्थलको व्यवस्थापनदेखि सहभागी जुटाउन ठूलै धनराशी खर्च गरेको देखियो ।
हजारौ संख्यामा भाग लिएका एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले यहाँ ठूलो धनराशी खर्च गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरे । सर्वहारा बर्गको पार्टी भनेर राजनीति गरिरहेको एमालेले औपचारिक रुपमा यो महाधिबेशनमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ । तर, यो खर्च वास्तविक होइन । मञ्चका लागि ५० लाख, मस्कटमा ३ लाख ५० हजार, झन्डामा २० लाख त सामान्य खर्च भएका उदाहरण हुन् । यसरी हेर्दा कार्यकर्ताको खर्चबाहेक पार्टीकै खर्च १५ करोडभन्दा बढि भएको हुन सक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
सौराहाका ३०० भन्दा बढि होटलमा ३५ हजारभन्दा बढि कोठामा त कार्यकर्ता बसेका छन् । २१ सय ७५ यस्ता महाधिबेशन प्रतिनिधिसँगै कम्तीमा अन्य चारजना कार्यकर्ता बसेका छन् । महाधिबेशन प्रतिनिधि र कार्यकर्ता होटलमा बस्दा नै ८ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च देखिन्छ । चितवन, मकवानपुर लगायतका नजिकैका जिल्लाबाट १० हजारभन्दा बढि आएका छन् । र कैयन कार्यकर्ता विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका थिए ।
यी सबैको खर्चसहित हेर्ने हो भने यो महाधिवेशनका लागि कम्तीमा पनि ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, यसरी तडकभडकपूर्ण महाधिबेशनमा हुने खर्चले भ्रष्टाचारसँगै महंगी बढेको अध्येताहरु बताउँछन् । सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने पार्टीले ब्यापारी तथा ठेकेदारहरुको सहयोगमा गरिने यस्तो तामझामपूर्ण महाधिबेशनले तत्कालका लागि चितवनको अर्थतन्त्र चलायमान बनाए पनि अन्ततः जनताको थाप्लोमा महंगी बढाएको छ । समाजवाद उन्मुख पार्टीले खर्चिलो महाधिवेशन गर्दा भ्रष्टाचार र वेथितिलाई प्रश्रय दिनेछ ।
त्यस्तै भर्खरै सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको १४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा १० करोड खर्च गरेको प्रारम्भीक अनुमान छ । यद्यपी पूजीवादी बर्गको नेतृत्व गर्ने काँग्रेसले सर्वहारा बर्गको नेतृत्व गर्ने एमालेको भन्दा २० करोड रपैयाँ कम हो । काँग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ५ देखि ६ करोड रूपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरे पनि तोकिएको मितिमा महाविधेशन नटुङ्गिदा खर्च बढेको काँग्रेसको दावी छ । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ५ देखि ६ करोड खर्च हुने अनुमान गरे पनि महाधिवेशनको अवधि लम्बिँदा त्यहीअनुसार खर्चमा वृद्धि भएको काँग्रेसको दावी छ ।
सर्वहारा बर्गकै नेतृत्व गरिरहेको दावी गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चलिरहेको छ । माओवादीले यो महाधिवेशनलाई अनावश्यक तडकभडकभन्दा पनि बैचारिक बहसमा केन्द्रीत गरेको छ ।
महाधिवेशनका लागि छुट्याइएको ५ देखि ६ करोड रूपैयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि भोजन, आवास, मञ्च निर्माण, प्रचारप्रसारमा खर्च लाग्ने अनुमान थियो । मञ्च व्यवस्थापनमा मात्रै ४० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसैगरी महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई भोजन तथा आवासका लागि ३ करोड ५० लाख रूपैयाँदेखि ४ करोडसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । महाविधेशनको मिति लम्बिँदा आवास तथा भोजनमै ४ करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
काँग्रेसले महाधिवशेन प्रतिनिधिलाई छाकैपिच्छे दुई थरी मासु खुवाउँदा पनि खर्च बढेको बताएको छ । प्रत्येक महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई होटलमा एउटा बेडको व्यवस्था मिलाइएको छ । एमाले र काँग्रेसको महाधिवेशनमा भएको खर्चलाई मात्रै तुलना गर्ने हो एमाले सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टी रहेन भने काँग्रेस पुजीवादी वर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टी रहेन । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशनमा १ करोड खर्च गरेको अनुमान छ । यद्यपी खर्च विवरण भने अहिलेसम्म सार्वजनीक भएको छैन ।
सर्वहारा बर्गकै नेतृत्व गरिरहेको दावी गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चलिरहेको छ । माओवादीले यो महाधिवेशनलाई अनावश्यक तडकभडकभन्दा पनि बैचारिक बहसमा केन्द्रीत गरेको छ । महाधिवेशनमा १७ सय ४२ प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । सबै प्रतिनिधिले खाने, बस्ने व्यवस्था आफैँले गरेका छन् । प्रतिनिधिका लागि पार्टी केन्द्रले दिउँसो एकपटक खाजाको मात्रै व्यवस्था गरेको छ । बिहान बेलुकाको खाने र बस्ने व्यवस्था सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश कमिटीहरुले नै गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन मितव्ययी र निकै कम खर्चमा सकिँदैछ । विगत ८ दिनदेखि जारी महाधिवेशनमा पूर्व अनुमानित बजेटभन्दा कम खर्च भएको छ । महाधिवेशन लम्बिँदा पनि खर्च सोचेजति भएको देखिँदैन । माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनका लागि एक करोड खर्च अनुमान गरेको थियो । शनिबारसम्म महाधिवेशनमा झण्डै ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको आयोजकले जनाएको छ । महाधिवेशन एक करोडभन्दा कम खर्चमै सकिने अनुमान छ । महाधिवेशन अनावश्यक तडकभडकभन्दा पनि बैचारिक बहसमा केन्द्रीत भएकोले खर्च कम भएको माओवादी नेताहरुको दाबी छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा मात्रै नभएर पार्टीका आन्तरिक निर्वाचन र महाधिवेशनले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिइरहेका छन् । राजनीतिक शक्तिकै प्रभावले प्राप्त भएको पदीय शक्तिको प्रभाव र दबाबका कारण लोभलालचमा लिप्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहज वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व तह र सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूको शिर लाजले झुक्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरू नै डुक्रिँदै हिँड्ने स्थिति विद्यमान रहनु निकै ठूलो दुर्भाग्य पनि हो ।
संस्थागत भ्रष्टाचारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो र जर्जर बनाउँछ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र यस्तै खोक्रो र जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा तिनैले भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्छन् भने उदाहरण बनेका छन् राजनीतिक दलका महाधिवेशन । मुलुकका ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले पार्टी सञ्चालनका लागि ठूला व्यापारीहरूबाट प्राप्त गर्ने चन्दा र सत्तासीन राजनीतिक पार्टीले तिनै ठूला व्यापारीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी गर्ने आर्थिक तथा कानुनी निर्णयहरूबाट घुमाउरो पारामा पार्टीले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ पनि संस्थागत भ्रष्टाचारभित्रै पर्छन् ।
मुलुकमा भ्रष्टाचारीकै रजगज छ । अरू क्षेत्रमा जतिसुकै अन्योल भए पनि भ्रष्टाचारको दिशा स्पष्ट छ । साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशनले भ्रष्टाचारको दिशा झन् स्पष्ट हुन्छ र झन् सहज हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वकै कारण मुलुकमा अरू उद्योग व्यवसाय सेलाए पनि भ्रष्टाचार उद्योगचाहिँ राम्रोसँग मौलाएको छ । यस्तो भ्रष्टाचारले मुलुकको अर्थतन्त्र नै गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनुका साथै आममानिस पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन् । नीति र ऐन कानुनलाई दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत वा संस्थागत लाभ हासिल गर्ने परिपाटीको विकासले मुलुकमा खुद्रे भ्रष्टाचारभन्दा होलसेल भ्रष्टाचार निकै खतरनाक रूपमा बढिरहेको छ ।
जुन मुलुकमा शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारविरोधीको ज्यानै लिन सक्ने आँट भ्रष्टाचारी, डन, दलाल र माफियाले गर्छन्, त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार कसरी घट्छ ? अवैधरूपमा स्रोत र साधनको दोहन गर्ने अपराधी माफिया, ठेक्का लिएर कमसल काम गर्ने लुच्चा ठेकेदार, व्यापारी, डन र दलालसँग हाम्रा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, उच्चपदस्थ र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतो अथवा साँठगाँठ छैन र ? यी सबैको सेटिङ नमिलिकन भ्रष्टाचार हुन सक्छ र ? काले–काले मिलेर खाऊँ भाले भन्ने र कानुनका अगाडि तैं चुप मैं चुपको सिद्धान्त अपनाइएको मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्छ र बढि नै रहन्छ ।
लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रका रूपमा उपयोग गर्न तँछाडमछाड गर्ने राजनीतिक दलहरूले जनताको अपेक्षालाई पाइतालामुनि धूलो कुल्चिएजसरी कुल्चिदिए । लोकतन्त्र आए यस्तो राम्रो हुन्छ र उस्तो राम्रो हुन्छ भनेर लोकतन्त्रका सकारात्मक पक्षका कुरा मात्रै गरियो । तर, लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र बनाउँछन् भनेर त्यसको नकारात्मक पक्षको कुरा कसैले गरेनन् र कहिल्यै गरेनन् । अहिले नेपाली जनता लोकतन्त्रभन्दा लुटतन्त्रको बढी अनुभूति गर्न बाध्य छन् र लोकतन्त्रको सुखानुभूतिभन्दा लुटतन्त्रको पीडानुभूतिले पिरोलिएका छन् ।
लोकतन्त्रसँगसँगै लोकलाज पनि जोडिएर आउनुपर्ने हो । तर लोकतन्त्रको दुहाइ दिने राजनीतिक दलहरूले पनि कहिल्यै लोकलाजको कुरा गरेको सुनिएन, देखिएन । बरु लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रको रूपमा उपयोग गर्न राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रलाई माध्यम बनाएर देश र जनतालाई लुटिरहे । यसरी देश र जनता लुट्नेहरूले कहिल्यै लोकलाजको वास्ता गरेनन् । उनीहरूलाई कहिल्यै लोकलाजको डर भएन । बरु भ्रष्टाचार गर्न सक्नुलाई पुरुषार्थको रूपमा लिइयो–हेरियो । भ्रष्टाचार गर्नेहरू नै समाजमा पुरुषार्थीका रूपमा स्थापित भए, सामाजिक प्रतिष्ठा कमाए र सम्मानित भए । हो, यस्तो परिवेशमा भ्रष्टाचार बढ्छ र बढि नै रहन्छ ।
पश्चिम नेपालको सबैभन्दा पुरानो संगीतालय जीर्ण, संगीतमा रम्ने युवाहरु बरालिँदै
कोरोना पुष्टि भएपछि प्रदेश राजधानीमै अपहेलित बनिन् गर्भवती, श्रीमान् आइसोलेशनमा
वन प्रक्रियामा अल्झियो राष्ट्रिय आयोजना
लागुऔषध कारोबारको नयाँ शैली, रियल जुसको बट्टाभित्र कोरेक्स